Tora Unyanzvi & Kudzidziswa Kwaunoda - Chitupa Chirongwa Chekutarisa »Hodges University
Sarudza Hodges University yeChitupa Chako Chirongwa
Ndeupi musiyano uripo pakati peSitifiketi, Chitupa, uye Chitupa?
Zvitupa zvekupedza kudzidza ndezvevaya vanoita atobata angangoita Bachelor's degree asi kuda graduate-chikamu kosi mune imwechete kana imwe hunyanzvi. Kazhinji, avo vanobata madhigirii ekupedza zvidzidzo vanozotora mukana wezvirongwa izvi kuwedzera vanopedza semester maawa (kazhinji 18) kuti vawane budiriro yezvidzidzo inodiwa kudzidzisa kosi-chikamu makosi.
Aya mapurogiramu anokwezvawo iwo parizvino kutsvaga degree rekudzidza uyo anoshuvira kuve nyanzvi mukutangisisa (kazhinji 9 semester semester maawa) kana kuda mamwe maawa kuti asvike kuma18 maawa echikwereti anodiwa kuti apedze Master's Degree. Semuenzaniso, akapedza kudzidza MBA uyo kosi yacho yaive mubhizimusi rese asi ane zvido uye / kana basa zvinosanganisira Forensic Accounting uye Kubiridzira Kuongorora kana Cybersecurity, anogona kutora chitupa se "wedzera-on" kune yavo tenzi degree uye kusangana neyakajairika mashoma kudzidza dzidzisa muchirango chakasarudzwa.
Chekupedzisira, Grad zvitupa zvinogona kutorwa seyako-wega magwaro kufambira mberi mune rako basa kana kupa mota yehunyanzvi uye yekuvandudza ruzivo.
Mienzaniso yeVapedza Kudzidza Zvitupa
Forensic Accounting uye Kunyengera Kuongorora
Kusiyana, Kuenzana uye Kubatanidzwa Hutungamiri
Dzidza Zvakawanda Nezvedu Zvitupa Zvekupedza Kudzidza
Undergraduate Zvitifiketi uye Indasitiri Certification
Zvitupa zvegraduate zvakagadzirirwa izvo akanyoresa mubatanidzwa kana chirongwa cheBachelor's degree uyo anoda tarisa sarudzo dzesarudzo munzvimbo yakapihwa. Aya mapurogiramu anotendera vadzidzi vepasi kuti vawane mamwe magwaro, vachivapa iyo kukwikwidza mumunda wavo wekudzidza.
Hodges Yunivhesiti yekarikhulamu inovhara dzakasiyana siyana misoro uye madhiri muminda senge bhizinesi, sainzi yemakomputa, uye e-mutemo. Vanogona zvakare kutorwa mira-wega, inobatsira kune avo vangade kuteedzera yakatarwa nzvimbo yekufarira vasina kutora yakakosha kosi yekosi.
Kana iwe uri kutsvaga kuti uwedzere hunyanzvi hwako, asi hazvireve hazvo kuti unoda kutora rese rehunyanzvi chitupa chirongwa, Hodges inopawo zvakasiyana isiri-chikwereti indasitiri-yakatarwa zvitupa izvo zvinogona kukwana.
Mienzaniso yeChechi yeChechi yeChechi
eBusiness Software kana e-Bhizinesi Ventures
Dhizaini Dhizaini kana Graphic Dhizaini Kugadzira
Ruzivo Tekinoroji Rutsigiro kana Rubatsiro Desk Rutsigiro
eDiscovery uye eLitigation
Dzidza Zvakawanda Pamusoro Pedu Undergraduate Zvitupa
Asiri-Chikwereti Zvirongwa Zvakatsanangurwa
Hodges Unganidzo zvirongwa zvinoitirwa kupa vadzidzi nazvo kudzidziswa mune yakatarwa yevashandi-kugadzirira or kufambira mberi nzvimbo. Gamuchira premium kudzidza mune asiri-echikwereti zvirongwa senge Chekutanga-Line Supervisor, EMT, kana CPR.
Dzidza Nezve Hodges Unganidzo